China DIN Standard Beaded Malleable Iron Pipe Fittings စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Donghuan
တံတောင်ဆစ်များ၊ တီရှပ်များ၊ အချိတ်အဆက်များနှင့် အနားကွပ်အဝိုင်းများ စသည်တို့ပါ၀င်သည်။ ကြမ်းပြင်အနားကွပ်သည် ပစ္စည်းများကို မြေကြီးပေါ်တင်ရန် အလွန်ရေပန်းစားသည်။မြင့်မားသောတိကျသောကိရိယာသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် သွပ်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် လျှပ်စစ်မီးဖိုအတွက် ပထမဆုံးအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်မီးဖိုများအပြင် စက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး အဝါရောင်အခွံများကို အသုံးပြုကာ အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ သတ္တုပုံသွင်းကြိုးအသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ချောမွေ့တောက်ပနေပါသည်။ .
1. ပစ္စည်း- ASTM A 197၊ ASTM A47၊ DIN EN 1562
2. Dimensions- DIN EN 10242
3.Threads- IS07-1၊DIN 2999
4. ရနိုင်သောအရွယ်အစား- 1/8''—6''
5.Surface: ပူပူနွေးနွေးကျဲကျဲသွပ်ရည်၊ အနက်ရောင်၊ ဇင့်-ချထားသည်။
6.Malleable fittings များတွင် တံတောင်ဆစ်များ၊ တီရှပ်များ၊ အချိတ်အဆက်များနှင့် အနားကွပ်အဝိုင်းများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ Floor flange သည် ပစ္စည်းများကို မြေကြီးပေါ်တင်ရန် အလွန်ရေပန်းစားသည်။မြင့်မားသောတိကျသောကိရိယာသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် သွပ်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် လျှပ်စစ်မီးဖိုအတွက် ပထမဆုံးအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်မီးဖိုများအပြင် စက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး အဝါရောင်အခွံများကို အသုံးပြုကာ အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ သတ္တုပုံသွင်းကြိုးအသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ချောမွေ့တောက်ပနေပါသည်။ .Casting လိုင်းအသစ်မှ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အတွင်းပိုင်း burrs များ ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ပြီး ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် IS0 9001:2000 နှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးစနစ်အား တည်ထောင်ထားပြီး ကနေဒါတွင် CRN ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဥရောပ CE နှင့် TSE ၏ တူရကီနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။
7.Malleable fittings များကို များသောအားဖြင့် စတီးပိုက်များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။သို့သော် သွပ်ရည်စိမ်ခံနိုင်သော ပိုက်များကို သွပ်ရည်စိမ်သည့်ပိုက်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ပျော့ပြောင်းနိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ဤအသုံးအဆောင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများရှိပါက သို့မဟုတ် ဝယ်ယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဖော်ပြချက်- Malleable Iron Pipe Fittings
9. စည်းမျဥ်းများ ငွေပေးချေမှုများ- မထုတ်လုပ်မီ TT 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများနှင့် B/L မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လက်ကျန်ငွေကို USD ဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းအားလုံး၊
10. ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- ထို့နောက် Pallet များပေါ်တွင် ပုံးပုံးများဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီး၊
11. ပေးပို့သည့်ရက်စွဲ- 30% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 60 နှင့် နမူနာများကို အတည်ပြုခြင်း၊
12. ပမာဏသည်းခံမှု- 15%။
ယခင်- Air Hose Couplings EU အမျိုးအစား
Hinged Pipe Clamp, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, American Standard Fittings များ,